Izilomo zoMhlaba ziza eMzansi | News24
Izilomo zoMhlaba ziza eMzansi
ININGI labalandeli bebhola baseMzansi mhlawumbe bacabange ukuthi bayaphupha uma bezwa imibiko ethi iqembu elikhulu lase-Spain iFC Barcelona lizovakashela eMzansi kungekudala.
Iqiniso lithi izikhulu ze-Mamelodi Sundowns ne-South African Football Association (Safa), abaxhasi kanye neBarca bonke basebenza ngokubambisana futhi bamatasa baphothula amalungiselelo okuvakasha kwaleliqembu eliqukethe izihlabani kuphela.
Lomdlalo kulindeleke ukuthi uhehe amehlo amaningi emhlabeni wonke ozobizwa ngokuthi yi-Champions vs Champions, ozoba ngomhla ka-16 kuNhlaba (May) enkundleni yezemidlalo i-FNB Stadium.
Phela izingwazi zaseMansi nezisanda kudla umhlanganiso kwi-Premier Soccer League (PSL) iMamelodi Sundowns iyoqhuthana amakhizane noshampeni base-Spain be-LaLiga iBarcelona.
Ngelempelasonto edlule uMengameli we-Safa uDkt Danny Jordaan nomsunguli waMasandawana uMnuz Patrice Motsepe kade beyobuka umdlalo obuphakathi kwe-Real Madrid ne-Barca nalapho bebehlele ukuphothula izingxoxo ngalomd- lalo.
Okumnandi wukuthi i-Sundowns ne-Barca basebenzisana ngokuzwana futhi bayaqikelela ukuthi izinhlelo zabo zemidlalo aziphazamiseki.
AmaSandawana asehlehlise umdlalo wabo we-Confederation of African Football (Caf) Champions League abazowudlala ne-Horoya AC yaseGuinea ngomhla ka-15 kuNhlaba (May).
Lokuvakasha kwaleliqembu eMzansi kuzoba kungokwesibili emlandweni wabo neSundowns.
Ngonyaka ka-2007 labolama qembu bake bahlangana badlala ePitoli eLoftus Versfeld nalapho iBarca yafika khona no-Ronaldinho no-Samuel Eto’o, bakwazi ukunqoba ngo 2-1.
Okumnandi ukuthi izikhulu ze-Sundowns zisayine isivumelwano sokuthi i-Barcelona iphoqelekile ukuthi ilethe izihlabani ezifana no-Lionel Messi, u-Luis Suarez kanye nabanye abahlale beseqenjini.
Usomaqhinga wabaqeqeshi we-Safa nowake waba ngukapteni we-Bafana Bafana ne-Kaizer Chiefs u-Neil Tovey uthi kuhle ukubona amaqembu aseMzansi afana ne-Sundowns emema izingwazi zomhlaba ukuze bazwane amandla ngoba kuzovula amathuba amaningi kanti nokuzimaketha kubalulekile.
UMnuz Tovey uthi kufanele kukhumbuleke ukuthi amaSandawane anabadlali abaningi abasebancane abafana no- Percy Tau, uSibusiso Vilakazi noThemba Zwane nabanethalente kanti lomdlalo uzobanika ithuba lokuthi babonwe uMhlaba wonke nezivakashi.
Uthe: “Imidlalo enje nobudlelwano obunje kufanele buqhubeke ukuze kusizwane futhi sincele ulwazi kwabangcono kunathi.”